Shantaan Waxyaabood Ku Dheh Xaaskaaga Si Aad Uga Farxisid Marka Aysan Farxad Heysan - Aayaha
Aayaha editorOctober 10, 2018
Waa kuwaan waxyaabaha ugu wanaagsan ee aad leedahay xaaskaaga marka aysan faraxsaneyn.
1. Adiga Ayaan kuu joogaa.”
Inaad u sheegtid inaad iyada u taagantahay waa mid kamid ah taageerada ugu weyn ee aad siin karto xaaskaaga, tani waxay siineysaa dareen gacaltooyo iyo inaad ka walwaleysid, waxay ogaaneysaa inay leedahay garab.
2. Waanku faraxsanahay inaad ii sheegtay
Tanina waxay ka saareysaa kalsooni darrada ay qabto, mararka qaar xaasaska raggooda uma sheegaan waxyaabaha maxaa yeelay ma garanayaan sida ay uga jawaabi doonaan, waxa ugu dambeeya ee ay u baahanyihiin ayaa noqon karta tanoo kale ama jawaabtaan wanaagsan, inaad siisid jawaabta ah waanku faraxsanahay inaad ii sheegtay oo aan ula jeedo waxyaabaha ay kuu sheegtay waxay dareensiineysaa kalsooni.
3. Waan isla qabnaa
“Waan isla qabnaa ama wadajir Ayaan u nahay” waxay tuseysaa midnimo, waana bandhigga ugu wanaagsan ee aad ku taageeri kartid xaaskaaga, waxay tuseysaa inaadan ka niyad jabeen dhib malahan wax kasta, kalsooni iyo farxad ayayna ka qaadeysaa.
4. “Miyay jiraan wax aan kaa caawin karo”
Inaad usoo bandhigtid taageero cad waxay tusineysaa sida aad u fahamsantahay iyo sida aad u rabtid inaad u garab istaagtid xittaa inta lagu guda jiro waqtiyadeeda xun, inaad wax u sameysid waxay wax ka badaleysaa dareenkeeda waqtigaas.
5. Waanku jeclahay
Inaad dib ugu muujisid jacaylka aad u qabtid marka ay xaaladda ku xuntahay oo jawiga ka qaldanyahay waxay noqon kartaa awoodda ay u baahantahay waqtigaas, inaad jacayl u muujisid waqtiyada ay xaaladda ku xuntahay waxa ay noqon kartaa waxa ugu wnaaagsan ee aad u sameyn kartid.